Watercolor tattoo - Mhando dzepamusoro dzemvura dzevarume nevakadzi
Watercolor Tattoo Design Mazano kune varume nevakadzi
Zvinorehwa nemvura yakakura
Sezvakanaka kunaka, izvi zvinoratidzika zvinomiririra zvinoreva izvo zvakafanana. Chiratidzo chinogona kuva chiratidzo chekuyeuka, kufungidzira kwekutenda kwako, kuratidzira rudo rwedu kune avo vakapfuura kana kungoita mufananidzo wemifananidzo. Nzira yakawanda inowanzozivikanwa yemvura inonzi tattoos ndeyeye shiri neyezvipembenene.
Butterfly watercolor tattoos inoratidzira hupenyu, tariro, kushandura muviri uye kuberekwa patsva zvinowanzoshandiswa. Mvura yakabhururuka yemafuta yakafanana nehosi inoratidza rudo uye runako asi lotus inoratidza kuchena. Chimwe chezvinhu zvinowanzozivikanwa nemaruva anotora ndeaya a daffodil anorohwa nemhepo, iyo inofananidzira kurega kuenda kwehupenyu hurombo uye rusununguko.
Abstract arts inowanikwa uye inotora mvuracolor tattooing. Kuvhara nekuputika kwemavara kunomiririra manzwiro ako, pfungwa kana maonero. Zvinoreva maitiro akasiyana-siyana zvinotsanangurwa nenzira yakasiyana nevakatarisa.
Watercolor back tattoos for girls
Mvura yemvura inogadzirisa zviratidzo zvemashure kumashure
Watercolor hand tattoos for girls - Chikamu 1
Mvura yemaoko maoko zvidhori zvevasikana - Chikamu 2
Watercolor leg leg tattoos zvevakadzi
Mvura yemajezi mahudyu emadzimai
Watercolor tattoos kurutivi rwevasikana
Mvura yemvura shure kwefudzi mapfupa emadzimai
Watercolor shoulder shoulder tattoos for girls
Mvura yemuvara wepamberi mifananidzo yevasikana
Mvura yemvura pamberi pefudzi mapfupa emadzimai
Watercolor Arm zvidhori zvevakadzi
Watercolor sleeve tattoos kuvanhu
Mvura yemvura inobata mapfupa evanhu
Watercolor leg leg tattoos kuvanhu
Mvura yemavara emifananidzo yevanhu
Chest watercolor tattoos kuvanhu
Shandisa chikwata chemvura yakagadzirirwa tattoo kuvanhu
Nzvimbo yakanaka yekuiswa kwemvura inotakura
Chinzvimbo chekuiswa kwemvura nyora yakakosha sekusarudza nzira yakarurama. Nzvimbo yekutora tattoo inobva paukuru hwe tattoo. Mifananidzo yakakura inotaridzika zvakanaka kana yakaiswa munzvimbo dzakakura dzakadai sedzoka shure, mudumbu, chibvu, makumbo nefudzi, asi zviduku zviduku zvakakosha kune zviduku zvakadai semakumbo, maziso, musana, shure kwezeve uye kunyange paminwe.
Vamwe vanhu vane zvigadziro zvemagariro evanhu uye zvemhizha pakuwana inki. Kune vanhu vakawanda vorudzi urwu, matanho panzvimbo dzinogona kuvharwa zviri nyore dzakanaka zvakadai sedhu, chiuno.
Izvozvo zvinokonzerwa nekudzivirira zvakakodzera hazvina kutorwa. Izvi zvinoreva kurega kuchengetedzwa kubva kunezuva uye kugunzva kana zvichidiwa zvakakosha. Watercolor tattoos inotarisa zvakanyanya pane ganda rinopenya sezvo chinyorwa chisina kufanana cheinki ye tattoo chinowedzera zvakajeka mumutambo uyu wokunyora. Zvakanakisisa kusarudza nzvimbo yakafukidzirwa kana isina-tanned yekunyora mifananidzo.
Kugadzirira mazano pamusoro pokuwana tattoo
Zvishoma zvinhu zvinofanira kuyeukwa vasati vatora tattoo ndezvi:
Kuti udye kudya kwakakodzera usati waenda kunyorera mifananidzo se muviri inoda simba kuporesa kuora kwe tattoo uye nekudzivisa kudzivirira nzara apo zvirongwa zvekutora mavara zvakakura. Zvichengetedze uine hydrated nguva yose.
Pfeka nguo dzakasununguka kubvisa kana kuvhomora zvichienderana nenzvimbo yekunyora.
Iva wakagadzirira nezvose zvinotarisirwa zvinokosha zvinoda kutora tattooing zvakadai sean antibacterial ointments kana gauze. Zviri nani kutaurirana nemutambi wekare kare pamusoro pezvose zvinokosha zvekutengwa.
Mitambo yemvuracolor tattoos
Watercolor tattoos ndeyekusiyana kwemavara ekugadzira mifananidzo yakagadzirwa kubva pamadziro uye mapapiro emavara. Izvozvo zvakasiyana-siyana zvemavara zvinoshandiswa zvinoita zvinoshamisa. Nezvenzira dzakasiyana-siyana dzinowanikwa, kuvepa zvinyorwa zvakaoma. Mhemberero mbiri dzakasiyana dzakasiyana dzinotsanangurwa zvichibva kune zvakasvibirira zvisikwa tsvina.
Watercolor Tattoos pasina Black base -
Watercolor tattoos pasina nheyo yakasviba inoratidzirwa sekutora tattoo pasina ruvara rutsvuku kana basa remumuganhu. Kubudisa mavarai anotarisa zvakafanana nemufananidzo wekoji. Aya marudzi ematoto akafuratira miganhu yakaita sechisanganiswa neganda uye zvakaoma kusiyanisa. Chinonyanya kuvimba nehupenya hwakajeka hwekugadzira kuita kuti iwedzere kufadza.
Watercolor Tattoos nechepasi tsvuku
Watercolor tattoos nechepasi yakasviba inogadzira nemumwe mutambo. Iko kuiswa kwacho zvinobva kwaitwa pamabasa aya. Skeletal line work inopa kuenzanisa kwakanyanya kusiyanisa kune avo vasina tsvina yakasviba. Vanyori vanoongorora matanho vanochengetedza mutsva wepasi nekuda kwezvikonzero zviviri. Chokutanga chikonzero kukwanisa kwenheyo yakasvibirira kusvika muchechi zvishoma nezvishoma uye yechipiri chikonzero ichi chisinganzwisisiki chekunyora mavara mukutumira zvigadzirwa pasina miganhu yakasviba.
Popular Watercolor Tattoo designs
Floral Watercolor tattoos- Mvura inoshandiswa yemafuta inotapira inonyanyozivikanwa sezvo inouya mumifananidzo yakajeka uye maumbirwo. Mifananidzo yakajairika yakave yakasikwa ndeye roses, lotus, sunflower, daffodils, tulips, maruva cherry nemaruva. Izvi zvinogona kuitwa semaruva asina kukwana kana kuti mumusana unozvipa kutarisa kunoshamisa.
Butterfly watercolor tattoos- Butterflies yakakosha yekushandiswa semvuracolor tattoo art sezvo aya ane ruvara ruvara rwemufananidzo uyo unotarisa unyanzvi. Mucherechedzo anogona kuenzanisa mavara mazhinji uye kuumba mararamiro akasiyana-siyana.
Feather watercolor tattoos- Feather mvura yakabatanidzwa inotarisa inotarisa pamuviri wemutakuri sezvo inofadza kunaka iyo inoyerera uye inokwezva. Kubatanidzwa kwemavara mazhinji nemafuta ekufema kunopa kuonekwa kwepakutanga.
Wolf watercolor tattoos- Wolf watercolor tattoos chimwe chigadzirwa chakakurumbira chinodiwa nevakawanda. Kusiyana nemhuka yekare yehupenzi, zviratidzo zvemvura zvinogona kuunza hupenyu hwakafanana nehutano huchiita kuti ufare kune vanoona.
Hove yemvura yehove- Ihove tattoo ndeimwewo yakakurumbira tambo yekugadzira sezvo inayo inoyerera. Kuenzanisa hove dzehove mumvura pamwe chete zvinotyisa zvikuru nekushandiswa kwemavara akajeka uye splashes.
Hummingbird watercolor tattoos- Zvinyorwa zveHummingbird zvinhu zvakanakisisa zvinogadzira sezvinoputika mapapiro ayo nekukurumidza, zvichipa kusvibiswa mukufamba kwayo uye zviri nyore kuita mvura yakadzika inonzi tattoo.
Nzira dzekudzivirira kupera nokukurumidza kwemadziro emvura
Watercolor tattoos inowanzosvika pakupera kufananidzwa nemitambo yemitambo. Kushandiswa kwemavara ekuvhenekera pamatoto kunowedzera kushungurudzika kwekukura nokukurumidza. Watercolor tattoos age zvishoma nezvishoma kana kugadzirisa kwakakodzera kunovimbiswa. Izvi zvinosanganisira:
Sarudza mucheki wekodzero - Imwe nyanzvi ine ruzivo rwakawanda mumutambo uyu wekunyora mifananidzo inoita kuti hutano hugadzirwa kubva kumagadziro anodzivisa kupera kwahwo nokukurumidza. Nguva dzose sarudza muchengeti wako wakachenjera nokuvakumbira kuti vape sampuli yemabasa avo apfuura. Pasina nyanzvi tattoo anoziva haagoni kuita mvuracolor tattoos sezvinodikanwa kubata nevamwe uye maitiro.
Chengetedza kure nezuva - Chiedza chezuva chinova nemigumisiro yakaipa zvakafanana panguva yekare uye nematoto matsva. Kuratidzirwa nguva dzose kwechitema kuzuva kunobatsira kukurumidza kukurumidza. Kushandiswa kwesimba rakakwirira zuva rekuvhara maziso kuvhara kusvibiswa kwezuva kubva pazora yako kunonyanya kukurudzirwa. Kuvhara matanho nekupfekedza maererano kuchabatsira zvakare pakudzivirira kupera.
Chengetedza ganda rakanaka - Runako rwetambo rinogona kugara kwenguva refu apo ganda raakasika rakagwinya. Kudya kunovaka muviri, kukwana kwakakwana uye kubata kwakanaka kunoita basa guru pakuita kuti hutsva hutsva
Moisturize - A hydrating moisturizer inokosha pakudzivirira kuputika, kukonzera uye kufa kunze kweganda uye kuchichengetedza zvakanaka. Kushandiswa kwekunhuhwirira pasina kunaka kwakanaka kweganda-sensitive lotions kunobatsira mukukurumidza kuporesa kwetambo uye kudzivirira kupera.
Kudzivirira Rubbing - Zvidhori munzvimbo dzinowanzogadziriswa kazhinji zvinokonzera kupera nokukurumidza kwema tattoos. Zvinokurudzirwa kudzivirira kuisa zvipfeko kumusoro kwetsoka dzako kana zvigaro.
Watercolor tattoos inogadzirwa pasina chero yakagadzirirwa yakagadzirika kana ichienzaniswa nemitambo yemaitiro inoda mufananidzo wakakodzera uye mumvuri. Watercolor tattoos anopa vaongorori rusununguko rwekusika kusimbisa zvirongwa zvakasiyana nemamwe mavara. Watercolor tattoos yezvigadzirwa zvose zvinogona kuumbwa zvakapiwa, muchengeti wekodha ane unyanzvi hweunyanzvi mune mvuracolor tattooing.
Tags:tattoos for girls tattoos kuvanhu watercolor tattoo
Heart Tattoosarrow tattoodiamond tattoofoot tattoosangel tattoosAnchor tattoostattoos for girlswatercolor tattooflower tattoosrudo tattoosmwedzi tattoosoctopus tattoozodiac zviratidzo zviratidzomaoko tattooszuva tattoostattoo ideasrose tattoossleeve tattoosscorpion tattooGeometric Tattoosarm tattoosback tattoosrip tattoosbutterfly tattoosmimhanzi tattooscute tattooscherry blossom tattoocross tattooselephant tattookorona tattoosbirds tattoosshamwari yakanakisisa tattooseagle tattoosneck tattoosFeather Tattoocouple tattoostattoo yezisoshumba tattoocat tattooslotus flower tattookoi fish tattootribal tattoosAnkle Tattoostattoos kuvanhuhenna tattoomehndi designcompass tattoohanzvadzi tattooschifuva tattoosinfinity tattoo